3D ध्वनिक प्यानलहरूको प्रभावलाई असर गर्ने कारणहरू - समाचार - Suzhou Soundbetter Architectural Materials Co., Ltd.
3D ध्वनिक प्यानलहरूको प्रभावलाई असर गर्ने कारणहरू
प्रभावलाई असर गर्ने कारणहरू3D ध्वनिक प्यानलहरू
1. ध्वनि अवशोषण र आवाज घटाउन भित्रको ध्वनि स्रोत अवस्थाहरूको प्रभाव। यदि कोठामा धेरै ध्वनि स्रोतहरू छरिएका छन् भने, कोठामा जताततै प्रत्यक्ष ध्वनि धेरै बलियो हुन्छ, र ध्वनि अवशोषण प्रभाव अपेक्षाकृत कमजोर हुन्छ। यद्यपि कमीको मात्रा सीमित छ, पुनरावृत्तिको आवाज घटाइएको छ, र इनडोर कर्मचारीहरूले विषयगत रूपमा भ्रमको भावनालाई हटाउँछन् कि आवाज संसारभरबाट आउँछ, र प्रतिक्रिया राम्रो छ।
2. ध्वनि-अवशोषित सामग्रीको वर्णक्रमीय विशेषताहरू आवाज स्रोतको वर्णक्रमीय विशेषताहरूसँग मिल्दो हुनुपर्छ। ध्वनि-अवशोषित सामग्री ध्वनि स्रोतको वर्णक्रमीय विशेषताहरू अनुसार चयन गरिनुपर्छ, र ध्वनि-अवशोषित सामग्रीको आवृत्ति स्पेक्ट्रम शोर स्रोतको वर्णक्रमीय विशेषताहरूसँग मेल खानुपर्छ। उच्च-फ्रिक्वेन्सी आवाजको लागि, उच्च-फ्रिक्वेन्सी ध्वनि-अवशोषित सामग्रीहरू, र कम-फ्रिक्वेन्सी ध्वनि-अवशोषित सामग्रीहरू प्रयोग गर्नुहोस्।
3. ध्वनि अवशोषण र आवाज घटाउने प्रभाव कोठाको आकार, स्केल र ध्वनि अवशोषण अभिविन्याससँग सम्बन्धित छ। यदि कोठाको भोल्युम ठूलो छ भने, मानिसहरूको गतिविधि क्षेत्र ध्वनि स्रोतको नजिक छ, प्रत्यक्ष ध्वनि प्रमुख छ, र ध्वनि अवशोषण प्रभाव यस क्षणमा कमजोर छ। सानो भोल्युम भएको कोठामा, ध्वनि धेरै पटक छत र भित्ताहरूमा प्रतिबिम्बित हुन्छ र त्यसपछि प्रत्यक्ष ध्वनिसँग मिसिन्छ।
4. निर्माण र प्रयोगको विचार। निर्माणमा प्रयोग गर्दा, ध्वनि-अवशोषित सामग्री र ध्वनि-अवशोषित संरचनाहरूको ध्वनि-अवशोषित गुणहरू स्थिर हुनुपर्छ।
अघिल्लो:3D ध्वनिक पर्खाल को स्थापना
अर्को:पलिएस्टर फाइबर ध्वनिक प्यानलका सुविधाहरू